कपाल धुँदा यस्ता गल्ति त गर्नुभएको छैन् ? सावधान - Naya Pusta
कपाल धुँदा यस्ता गल्ति त गर्नुभएको छैन् ? सावधान
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ चैत्र २ ०७:३२ 1
प्रतेक व्यक्ति आफनो कपाल बाक्लो र कालो होस् भन्ने चाहन्छन् । कपाल बाक्लो बनाउन विभिन्न तरिकाहरु अपनाइने गरिन्छ । तरपनि कतिपय मानिसलाई कपाल झर्ने समस्याले सताही रहेको हुन्छ ।
धेरै मानिसहरु कपाल झरेर तक्लु भएको पनि देखिन्छ । कपाल विभिन्न कारणले गर्दा झर्ने गर्छ । हामीले नुहाउदा कपालमा ध्यान नदिएको कारणले कपाल झर्ने गर्छ । कपाल धुँदा विभिन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । कपाल धुने तरिकाले पनि कपाल झर्ने गर्छ जुन कुरा मानिसलाई थाहा नहुनसक्छ ।
कपाल तक्लु हुनबाट बचाउन ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु यस प्रकार छन् :
१) रुमालले कपाल नसुकाउने :
रुमालले कपाल सुकाउन खोज्दा कपाल जर्खरिन्छ र यसकारण कपाललाई हानि हुन्छ । यसको साटो तपाईं टिशर्ट कपालमा बाँध्नुस् वा पेपर ब्लट प्रयोग गर्नुस् ।
२) अति सर्वत्र वर्जयेत् :
तपाईंले टन्न श्याम्पू वा कन्डिस्नर प्रयोग गर्दा कपाल राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो । धेरै हालेर जितिने यो कुनै प्रतियोगिता होइन, थोरै काफी छ ।
३) हल्का माड्नुस् :
भाँडा माझेजस्तो गरी टाउको घोट्नुभयो भने कपालमा समस्या आउँछ । यसो गर्दा कपाल झर्छ र कमजोर हुन्छ । हल्का मात्र माड्नुस् र कपाललाई हानिबाट जोगाउनुस् ।
४) फेदबाट टुप्पोतिर :
कपालको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जरो हो । कन्डिस्नरलाई कपालको फेदबाट टुप्पोतिर लगाउँदा तपाईंको कपाल नरम हुन्छ ।
५) श्याम्पू राम्रो चीज होइन :
विज्ञापनहरूमा श्याम्पूका कारण कपाल नरम हुने भनी देखाइएको हुन्छ । यसो हुँदैन । लामो समयसम्म श्याम्पू प्रयोग गर्दा कपाललाई फाइदा भन्दा पनि हानि गर्छ । तिनीहरूमा भएका रसायनले तपाईंको कपाल सुक्खा हुन्छ र कपाल झर्न थाल्छ । यसको साटो विशुद्ध पानीले कपाल धुनुस् ।
६) तातोपानीले ननुहाउनुस् :
यो पनि पढ्नुहोस् : चिया पिउनुअघि ख्याल गर्नुहोस् यी कुरा
दिनभर काम गरेर थाकेपछि तातो शावरमा छिर्न मन त लाग्छ तर यसरी तातो पानी टाउकोमा हाल्दा कपाल झर्छ । मनतातो पानीले नुहाएको ठीक । सम्भव भएसम्म चीसो पानीले कपाल नुहाउँदा त्यसले आराम पाउँछ ।
७) कन्डिस्नरको प्रयोग :
कन्डिस्नरको प्रयोगपछि धेरैजनाले त्यसलाई काम गर्न नदिइकन धोइहाल्छन् । तपाईं यो गल्ती नगर्नुस् । एउटा निश्चित समयसम्म कन्डिस्नरलाई टाउकोमा रहन दिनुस् । अनि कहिल्यैपनि चीसो कपालमा कन्डिस्नर नलगाउनुस् । सुक्खा कपालमा लगाएर केही समयपछि धुनु नै सही तरिका हो।
यी ६ राशिका लागि निकै राम्रो छ आजको दिन, हेर्नुहोस् शनिबारको दैनिक राशिफल
यी हुन्, दिमाग तीखो बनाउने खानेकुराहरू
कमजोरी, थकान र आलस्य भयो ? यो उपाय अपनाउनुहोस् ३ दिनमै आउनेछ नाटकीय परिवर्तन
अनुहारबाट थाहा हुन्छ यी १० रोगका संकेत, बेवास्ता नगर्नुहोस्
यी हुन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी उपाय अप्नाएर बचाउनुहोस्
जण्डिस छिटो निको पार्ने एक मात्र औषधी : पानी अमला
मान्छेको चिउँडो हेरेरै थाहा हुन्छ त को-कति भाग्यमानी ?
पोखराको फेवातालमा २७ डुबे, तीन जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
हातबाट यी कुराहरु खसे ? यस्तो हुनसक्छ अशुभ संकेत
यी हुन् मानिसलाई धन लाभ हुने २१ संकेत
यी संकेतबाट थाहा हुन्छ तपाईलाई कुनै केटीले मन पराएको छ
छाति तथा पेट पोल्ने समस्या छ ? अप्नाउनुहोस् यी उपाय